७३ वर्षमा जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएर यी महिलाले तोडिन् रेकर्ड ! – Waikhari
गृहपृष्ठ विविध ७३ वर्षमा जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएर यी महिलाले तोडिन् रेकर्ड !
यस प्रक्रियाको दौरान अण्डाहरू महिलाको अंडाशयबाट हटाइन्छ र प्रयोगशालामा शुक्राणुको साथ विकास हुन्छ । त्यसपछि भ्रुण निर्माण सुरु हुन्छ र पछि यो भ्रुण महिलाको गर्भाशयमा सम्मिलित हुन्छ । यदि अण्डा वा शुक्राणुमा कुनै समस्या छ र निषेचन प्रक्रियामा कुनै समस्या छ भने, त्यसपछि शुक्राणु वा अर्को दाताको अण्डा प्रयोग गरेर प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । #एजेन्सी